Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay sababta maamulkiisu u diiday shaqaalihii hay’ada NISA – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay sababta maamulkiisu u diiday shaqaalihii hay’ada NISA
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay sababta maamulkiisu u diiday shaqaalihii hay’ada NISA
Editor August 15, 2018 August 15, 2018 Warka 0
Kismaayo (Madal Furan) – Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maalmihii la soo dhaafay socdaal ku kala bixinayey waddamada Kenya iyo Itoobiya ayaa markii uu maanta ku noqday magaaladda Kismaayo wuxuu la hadlay saxaafadda.
Axmed Madoobe ayaa ka hadlay arrimo la xiriira xaaladda amaan ee maamjulka Jubbalandiyo arrinta Taliyeyaashii NISA ka socday ee shalay lagu xayiray Garoonka Kismaayo.
Saraakiishaas ayaa maamulka Jubbaland dib ugu celiyey magaaladda Muqdisho, wuxuuna Axmed Madoobe DFS si weyn ugu dhaliilay in aanay maamulkiisa kala tashan.
Wuxuuna ku sifeeyey arrin ka hor-imaanaya heshiisyadii amniga ku saabsanaa ee ay wada gaareen dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in nasiib darro ay tahay in dowladda Soomaaliya qeyb ka noqoto amni darada ka jirta dalka.
“Dowlada Soomaaliya kalama tashanin Jubbaland Magacaabista Taliyeyaashan, dowladda dhexena waxay qeyb ka tahay Amni daradda ka jirta dalka” ayuu yiri Axmed Madoobe
Dhegeyso:Muuse Biixi oo baajiyey socdaal uu balan qaaday inuu Kowda Lulyo ku tegi doono Ceel Af-weyn
Taliyayaal lagu dilay gobolka Sanaag
Weerar lagu dilay dad isku qoys ah oo ka dhacay duleedka Warsheekh